Somali daily News – Johan Cruyff Iyo Louis van Gaal Oo U Sharaxan Inay Buuxiyaan Booskii Comolli Ee Liverpool.
Johan Cruyff ayaa ka mid ah magacyada lala xiriirinayo Liverpool ka dib markii ay iska eryeen agaasimahoodii kubada cagta Damien Comolli, sida ay ogaatay BBC Sport.
Shirkada iska leh Liverpool ee Fenway Sports Group (FSG) ayaan weli go’aansan cida ay sida rasmiga ah u doonayaan inuu bedelo Comolli.
Lakiin halyeeyga reer Holland oo 64 jir ah ayaa soo jiitay madaxa FSG John W Henry, madaama uu Cruyff madax ka soo ahaa Ajax islamarkaana haatan uu la taliye sarre ka yahay kooxda Chivas ee dalka Mexico.
Cruyff, oo sidoo kale tababare u ah xulka gobolka Catalans ee Spain ayaa dhawaan ka degay shaqadii uu ka hayay kooxda Ajax ee dalka Holland.
Iyadoo shirkada FSG aysan dooneynin inay bedesho hanaanka uu u dhisan yahay maamulka kooxda, hadana waxa ay doonayaan inay keeneen qof magac weyn leh oo la ixtiraamo kaasoo caawiya tababare Kenny Dalglish, islamarkaana ciyaartoy soo xero geliyo marka uu suuqa kala iibsiga furan yahay.
Cruyff oo seddex koob oo European Cup ah kula guuleystay Ajax isagoo ciyaaryahan ah ayaa ka mid ah magacayo dhowr ah oo laga qiimeynayo Anfield, inkastoo aan la ogeyn inuu isagana xiiseynayo inuu Anfield shaqo ka qabto.
Louis van Gaal, oo isna shaqo ka maqnaa tan iyo intii tababare ahaan looga ceyriyay Bayern Munich sannadkii hore ayaa isna ku jira raga lala xiriirinayo booskaas.
Liverpool ayaan wax hadal ah kasoo saarin arintaan.